यौन भिडियो बाहिरिए पछि दम्पतिमा तनावमा, यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? – नेपालि भिडियो ब्लग, पहिलो र एक मात्र
माथि भिडियोमा उल्लेख गरेका दम्पतिले जस्तै आजकाल धेरैले आफ्ना अन्तरंग फोटो वा भिडियो खिचेर फोनमा वा कम्प्युटरमा राख्ने गरेका हुन्छन् । आजकल इन्टरनेट जोडिएका कुनै पनि फोन वा कम्प्युटर सुरक्षित हुँदैनन । जति सुकै लुकाएर राखे पनि, भाइरस लागेर वा ह्याकरले कप्युटर वा फोनमा भएका फाइलहरु चोर्न सक्छ्न ।
केहि समय अघि बिश्वका चर्चित सेलिब्रेटिहरुका नग्न फोटो र भिडियो एकाएक सार्बजनिक भएका थिए। ति सबै फोटो र भिडियो उनिहरुले आफ्नो आइफोनमा खिचेर लुकाएर राखेका थिए । एउटा ह्याकरले तिनिहरुको एकाउन्ट ह्याक गरेर सबै फोटो सार्बजनिक गरिदिए । यसरि सुरक्षाको लागि नाम कहलाएको आइफोनका डाटा त चोरि हुन्छन अरुको त के कुरा गराइ भो र ।
नग्न र अश्लिल फोटो/भिडियोले के गर्छन ?
मैले अघि नै भने – तपाइलाइ आफ्ना नग्न फोटो सार्बजनिक भएमा कुनै असर पर्दैन भने यो कुनै ठुलो कुरा होइन । तर तेस्ताअ फोटोले समाजमा असर गर्न, इज्यतमा असर गर्छ भन्ने लाग्छ तेस्तो फोटो चोरेर वा बिश्वस गरेकै ब्यक्तिले पनि ब्ल्याकमेल गर्न सक्छ । प्रहरिमा परेका उजुरि अनुसार –
चिनेजानकै व्यक्तिले पनि तेस्ता फोटो वा भिडियो देखाएर मोटो रकम माग गर्न । पैसा नदिएमा सार्बजनिक गरिदिने भनेर धम्कि दिन सक्छन् ।
शुरुमा आपसि सहमतिमा खिचिएका गोप्य क्रियाकलापका फोटो वा भिडियो पनि पछि मनमुटाब भएपछि सार्वजनिक गर्ने धम्की दिएर फिरौती माग्ने गरेका घटना पनि धेरै छन । यस्तो घटना नेपालि फिल्म निर्माता रोज राणा र अभिनेत्रि सौजन्य सुब्बाको केसमा पनि भएको थियो । रोजले सौजन्याका अन्तरंग फोटो सार्बजनिक गर्ने धम्कि दिए पछि उनि हनुमान ढोका पुगेकि थिइन ।
फिरौति वा पैसा नमागि रिस उठदा तेत्तिकै सार्बजनिक गरिदिंदा पनि आफुँ लगाएर आफ्नो परिवारमा अनावश्यक तनाव हुन सक्छ । माथिको भिडियोमा उल्लेखित दोश्रो घटना यस्तै एक उदाहरण हो ।
अर्को, कानुनि जटिलता पनि छ । कानुनत, नेपालमा अश्लिल फोटो वा भिडियो खिच्न पाइँदैन । आफ्नै नग्न फोटो खिच्दा पनि कसैले उजुरि मात्रै गरेमा पनि पुलिस केस हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । हुन त, यो सिद्धान्तको कुरा मात्रै हो र यस्तो घटना भएको मैले सुनेको भने छैन ।
नग्न र अश्लिल फोटो को समस्या बाट बच्ने उपाय के छ त ?
पहिलो कुरा, यौन र नग्नतालाइ पचाउन सक्ने हो भने; नग्न तस्विर, भिडियो वा यौन भिडियो सार्बजनिक नै भयो भने पनि हुन चाँहि केहि पनि हुंदैन । यसलाइ ठुलो कुरा मान्नु पर्ने कारण छैन । उदाहरणको लागि अभिनेत्रि नम्रता श्रेष्ठ को यौन भिडियो सार्बजनिक भए पनि उनको अभिनय क्षमताका कारण उनि सर्बोत्कष्ट अभिनेत्रि भएकि छिन । हालै उनले राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार र फान अवार्ड २०७३ हात पारिन ।
तर, हाम्रो सामाजिक संरचनाले यौन र नग्नतालाइ नपचाउने धेरै उदाहरणहरु छन् । यदि नग्नता वा यौन पचाउन सकिंदैन भने यस्तो समस्याबाट बच्ने एउटै र सजिलो उपाय हो – यस्ता फोटो वा भिडियो नै नखिच्ने ।
नग्न र यौन क्रिडाको फोटो वा भिडियो नखिच्ने
थाह नदिइ कसैले खिचेको रहेछ भन्ने थाह भएमा प्रहरिमा उजुरि गर्ने
पहिले नै खिचेर राखेका फोटो वा भिडियो छन भने मेटिदिने
यति गर्दा पनि सार्बजनिक हुन्छन भने – वास्ता नगर्ने । नम्रता श्रेष्ठलाइ सम्झने 😉
यि मेरा सुझाव हुन । तपाइलाइ यि भन्दा उपयोगि सुझावहरु थाह छन भने कमेन्टमा दिनु होला ।
भिडियोमा उल्लेख भएका घटनाहरु नागरिक दैनिकमा साउन ४ गते प्रकाशित सामाग्रिमा आधारित छन । यस्ता खालका घटना जोसुकै संग पनि हुन सक्ने भएको हुनाले सतर्क रहनुको बिकल्प छैन ।
This entry was posted in समाज, भाषा र चालचलन, Crime and tagged Photo, video. Bookmark the permalink.
← गुगल ब्वाइलाइ १ करोड दिनुमा ओलिका कारणहरु र मलाइ चित्त नबुझेका ४ कुराहरु
पुर्वमन्त्रि लालबाबु पण्डित सर्बसाधारण चढ्ने टेम्पोमा, मिडिया स्टन्ट मात्रै नहोला →